Shiinaha Warshadda Qaboojiyaha 'Postpartum Ice Pack' iyo soo saarayaasha | Huanyi
Xirmooyinka Xannuun Xanuun Xanuun Jirka ah
29.5 * 7.5cm, 220g, gacmo jilicsan oo la dhaqi karo oo wata baakado jel oo dib loo isticmaali karo, ayaa ugu fiican ka dib xanuun joojinta dhalashada ka dib
Daaweynta qabow waxay yareysaa bararka iyo cuncunka, iyadoo siineysa deg deg deg deg ah. Tani waxay kor u qaadeysaa ka-dhalashada dhalmada, jeexitaanka xubinta taranka iyo tolida, qalliinka, babaasiirta, dhiigbaxa, caabuqa khamiirka, jahwareerka ka imanaya bararka, ka saarista timaha laser, ama dhaawaca isboortiga, iyo kuwo kale.
Warshadeena ayaa kuu habeyn karta jaangooyada adiga, tusaale ahaan xirmooyinka kuusha 2Xgel iyo 3X gacmo, ama waxaad ku duubi kartaa xirmooyinka 1X jel oo leh 2X gacmo, kaliya si loogu raaxeysto loona isticmaalo joogto ah.
Xirmooyinka jel waxay ka samaysan yihiin filim darajo caafimaad oo aan sun lahayn waxayna ku ekaanayaan dabacsanaan iyo dabacsanaan marka la qaboojiyo, iyagoo siinaya raaxo aad u badan oo ah xirmooyinka barafka caadiga ah iyo xirmooyinka barafka isbitaalka.
Waxay ka fiican tahay inaad ku dhex rido boorsada isbitaalka.
Sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu dajiyo ku dhowaad qayb kasta oo jirka ah oo leh nabaro, caabuq, dillaac yar yar iyo gubasho, murqo xanuun iyo qallafsanaan, xanuun sii kordhaya, qandho, iyo daryeelka qoraxda kadib. Kala beddeli karaa inta u dhexeysa kuleylka iyo daaweynta qabowga. Si fudud u dhig qaboojiyaha ama barafeeyaha illaa heerkulka la doonayo ee saameynta baakadka / barafka. Saamaynta baakada kulul, si fudud u geli microwave-ka 25 kordhinta labaad ilaa heerkulka la doonayo laga gaaro.
Miyuu qofna u adeegsaday umulisyadan maro faashad ah? Khibrad?
Marka mahadsanid waxaan ka iibsaday iyaga bil ka hor maxaa yeelay waxaan ku dhammaaday helitaanka hemmorids waxaanan u baahanahay kuwan xanuun joojinta xitaa ka hor intaanan dhalan. Kuwani si wanaagsan ayey u barafeeyaan waana kuwo siman markii aad dibadda u soo saartid, ma ahan kuwo adag oo cufan ama adag.
JACAYL sheygan! Waxaan guriga ka aaday isbitaalka aniga iyo canugeyga cusub ee macaan. Waxaan jeexjeexay shahaadada labaad markii aan guriga aadayna diyaar uma ahayn gabi ahaanba. Waxaan dalbaday kuwan maxaa yeelay xirmooyinka barafka ee isbitaalku u diro guriga ayaa ka daatay meel caadi ah. Saddexda GentlePacks ayaan ku riday qaboojiyaha si deg deg ah ayeyna u qaboobeen. Waxaan galiyay gacmaha dhaqmi kara oo waxaan galiyay banaanka nigiskayga waxayna ka yareeysaa xanuunka iyo bararka.
Hore: Xirmada Barafka Naaska
Xiga: Suunka dhabarka oo leh bac baraf ah
Baakadaha ugu Fiican ee Dhalashada Kadib
Suumanka Barafka Dhalashada Kadib
Baakadaha Barafka ee Engorgement
Suumanka Barafka ee Uurka Kadib
Xidhmada Qabow ee Perineal
Xirmada Dhalashada Dhalashada Dhalashada
Xirmooyinka qabow ee dhalmada kadib